Dịka onye nwe azụmaahịa, enweghị m ike ịgwa gị oge ole m na-abịakwute ya na ohere ịmekwu ego ma ọ bụ abụọ na mgbakwunye mgbakwunye. Ọ bụrụ na m ga-eji naanị ike m rụọ ọrụ ha, ha ga-akwụ m ego. Na, ka emechara, ọ bụrụhaala na onye na-akwụ m ego m na-akpali ime ya… nri? Njọ.
Ọ bụrụ n ’ị gbadoro ụkwụ na iwulite ụdị ahịa azụmaahịa, chebe onwe gị oge ụfọdụ wee gaa ebe ndị mmekọ ahụ nọ. Clickbank, Òtù Ụlọ Ọrụ, ma ọ bụ ihe ndị yiri ya. Ma, anaghị m akụ ụdị ahụ. Ọ na-arụ ọrụ. Ọ bara uru. Ma e nwere ndị nwere nkà ma nwee mmasị n'ụdị ohere ahụ. Ọ ga - eme na ọ bụghị mgbe niile ka ha na ndị nwere azụmaahịa nwere ọganiihu nwere ụlọ ọrụ na - eweta uru ha nwere.
Maka ebumnuche dị iche iche, na-enwekarị ike ịme ihe oyiyi oyiyi, ahịa mmekọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe ị na-achọ mgbe niile. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike nweta nsonaazụ, ọ nwere ike ịbịa nwere aha. Ọ bụrụ na ịchọghị ka ị hụ ngwa ahịa gị na ọtụtụ narị peeji dị iche iche na-apịpịa ya na ogologo ogologo akwụkwọ, na-agbanye na twitter iyi juputara na njikọ njikọta, ma ọ bụ spammed na ọtụtụ nde mmadụ - niile na aha gị na ya - mgbe ahụ ị nwere tụlee ụzọ dị iche.
Ihe ịma aka, mgbe ahụ, kedu ka ị ga - esi nweta azụmaahịa "amaara ama" (na m na-eji okwu ahụ azụ oge, ebe m na-apụtaghị na ndị mmekọ nwere aha ọjọọ) na-anọchite anya ngwaahịa gị n'ụdị azụmaahịa na-achọghị mgbanwe karị? Azịza ya: chọta ihe na-akpali ha.
You nwere ike ịhụ onye ọrụ a na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụdị ahịa ahịa na-eme nke ọma taa. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ihe atụ ebe ndị nkwusa na-achọ itinye ihe ntinye, mana ha ghọtara na agụụ maka ụlọ ọrụ ahụ bụ maka ihe okike. Ndị nkwusa na-achọpụta ihe na-eme ka ihe mgbaru ọsọ dịkwuo elu. Ọrụ mbụ m bụ ire ngwanrọ maka Autodesk VAR dị na mpaghara. O juru m anya na ihe kpatara Autodesk ji kwụọ ụgwọ ọnụọgụ abụọ maka ọrụ, ruo mgbe m ghọtara na ha chọrọ ịgba ndị ahịa ume n'ụzọ ọ bụla enwere ike ịme VAR mpaghara maka ọrụ. Ọbụna nke m Onye Mmekọ A na-ewube mmemme ahụ n'ihe m mụtara na uru ndị a, yana ndị ọzọ.
Iwuli uzo ahia adighi nfe, o di obere usoro. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ngwa ngwa ma dịkwa mfe, nweta ndị mmekọ nọ n’akụkụ gị. Y’oburu n’inwere ihe n’uche gi karie ego, matazie na anyi onwe anyi di otu a.